प्रदेश १ को राजधानी र नामका विषयमा बहस सुरु, तपाईको धारण के ? — Motivatenews.Com
प्रदेश १ को राजधानी र नामका विषयमा बहस सुरु, तपाईको धारण के ?
विराटनगर – प्रदेश १ को नाम र राजधानीका विषयमा बहस सुरु भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सभाले औपचारीक रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा खासै चासो देखाएको थिएन तर पछिल्लो समय प्रदेशसभाले सूचना प्रकाशित गरेरै सरकारसंग प्रस्ताव माग गरेको छ ।
प्रदेश १ मा फेरी एक चोटी प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा तनाव हुने पक्का छ । नामका विषयमा कोशी, सगरमाथा र किरातका विषयमा बहस भइरहेको छ । लामो समयसम्म सहमति हुन नसक्दा पछिल्लो समय सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभाले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानून अधिकृत मञ्जु खड्काका अनुसार नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव १९ वैशाखसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउन अनुरोध गरिएको छ । दर्ता भएका प्रस्तावका विषयमा १९ वैशाखको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएपछि सदनमा पेश हुनेछ ।
प्रदेशसभा १ को हालै संशोधित नियमावलीअनुसार नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउन दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्तावक चाहिन्छ । ती प्रस्तावमाथि छलफल गरी प्रदेशसभाले बहुमतले निणय गर्नेछ ।
प्रदेश १ को राजधानीका लागि विराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ (मोरङ) र धनकुटाले पनि माग गर्दै आएका छन् । यसअघि राजधानीकै विषयमा धेरै ठाउँमा आन्दोन पनि भएका थिए । यो विषयले संसदमा प्रबेश पाएपछि फेरी एक चोटी प्रदेश १ मा आनदोलनको ज्वाभाट उठ्ने आँकलन राजनितिक विश्लेसकहरुले बताएका छन ।
प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघीय समाजवादी फोरम ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक र एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ, जुन सत्तारुढ नेकपा एक्लैसँग छ ।
२०७६ बैशाख १५ गते प्रकाशित